कस्मेटिक र फार्मेसी होइन, चिकित्सककोमा जानुपर्छ | गृहपृष्ठ
Home स्वास्थ्य र जीवनशैली कस्मेटिक र फार्मेसी होइन, चिकित्सककोमा जानुपर्छ
on: May 18, 2018 स्वास्थ्य र जीवनशैली
डा. ललन खतिवडा, कस्मेटोलोजिष्ट एण्ड स्किन लेजर सर्जन
छालामा केही समस्या देखियो भने सामान्य रूपमा लिने प्रचलन नेपाली समाजमा छ । झन् छालाकै कारण टाउकोमा कपाल पलाएन भने बुद्धिमान र भाग्यमानी भएको भनेर बुझ्ने गरिन्छ । वास्तवमा विभिन्न सङ्क्रमण, वंशानुगत, हर्मोनलगायत कारणले छालामा समस्या देखिन्छ । छालाको उपचारका लागि बेलैमा चिकित्सककोमा नगए समय र पैसाको त नाश हुन्छ नै, अनेक किसिमका जटिल समस्यासमेत आउँछ । प्रस्तुत छ, छालाको रोग र तालु खुइलिने समस्याबारे डा. ललन खतिवडासँग आर्थिक अभियानका पूर्णभक्त दुवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालमा छाला रोगको अवस्था कस्तो छ ?
छालाको समस्यालाई धेरैले सामान्य रूपमा लिन्छन् । तर, छालाको रोगलाई हेलचक्र्याइँ गरियो भने यसले शरीरमा जटिल समस्या ल्यान सक्छ । छालाले शरीरलाई भित्री सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउँछ । छालामा पनि विभिन्न समस्या देखापर्छ । सुक्खापन, एलर्जी, चिलाउने, फाट्ने जस्ता समस्याका साथै शरीरको भित्री भागमा हुने कुनै पनि रोगको लक्षण छालामा देखिने गर्छ ।
छालाको रोगबारे कत्तिको सचेतता पाइन्छ ?
छालाको समस्यामा हेलचक्र्याइँ धेरै छ । हेलचक्र्याइँ यतिसम्म छ कि घरमै जथाभावी मल्हम लगाएर उपचारको प्रयास गरिन्छ । छाला चिलाउने, पोल्ने भयो भने फार्मेसीमा र कच्चापदार्थफोर, पोतो आयो भने ब्यूटिसियनकहाँ जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । चिकित्सककहाँ जाने त चलन नै छैन । छालामा गम्भीर समस्या भएपछि मात्र चर्मरोग विशेषज्ञलाई देखाउने गरिन्छ । पहिलो रोजाइ चिकित्सक हुनुपर्नेमा अन्तिम रोजाइ चिकित्सक हुने गरेको छ । नचाहिने औषधि लगाउँदा छाला पातलिने, धेरै औषधि किन्नुपर्ने, छाला फाट्ने समस्या आउँछ ।
सुक्खापन, एलर्जी, सङ्क्रमण बढी देखिने समस्या हुन् । उमेर बढ्दै जाँदा अनुहार चाउरी पर्ने, हात र खुट्टा फाट्ने, छाला खुम्चिने समस्या हुन्छ । छालाको रोगसँग लड्ने क्षमता (इम्युनिटी पावर)मा गडबडी आएमा एलर्जीको समस्या हुन्छ । लामो समयसम्म हातमा घडी, ब्रासलेट, क्यामिकलयुक्त रङ आदिको प्रयोगले छालाको माथिल्लो भागमा असर पार्छ र एलर्जी गराउँछ । छालामा भाइरस, ब्याक्टेरिया र फङ्गस (ढुसी)का कारण छालामा सङ्क्रमण हुन्छ । यसैगरी लुतो पनि सङ्क्रमणकै कारण हुन्छ । छालामा एक मानिसबाट अर्कोमा सङ्क्रमण हुने गर्दछ । योसँगै घरपालुवा कुकुर र बिरालोबाट पनि सङ्क्रमण हुन्छ ।
गलत औषधिले छालामा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
बाहिर जहाँ तहीँ औषधि–उपचार गर्दा छाला फाट्ने जोखीम हुन सक्छ । यसले गर्दा रिकभरी हुँदैन । छाला पातलो हुँदा भित्री नसा देखिन्छ । रौंहरू पलाएर आउँछ । छाला यस्तोसम्म हुन्छ कि जुन मल्हम प्रयोग गरेको हो, त्यो नलगाए पोल्ने, चिलाउने हुन्छ । छालालाई बानी पार्ने तत्त्व कस्मेटिक मल्हममा हुन्छ । नेपालमा काछ लाग्यो भने पनि अन्तिममा मात्र चिकित्सककोमा आउने गरिन्छ । गर्मी मौसममा ६० प्रतिशतलाई काछ लाग्ने समस्या हुन्छ । काछ लागेको ठाउँमा ढुसी पर्छ । यस्तोमा बारिहको जे पायो त्यही औषधिको प्रयोगले झनै जोखीम बढाउन सक्छ ।
छालाको समस्याबाट बच्ने उपाय के के हुन् ?
चिकित्सकको सल्लाह लिएर मोइश्चराइजिङ क्रिम, लोसन लगाएर सुक्खापनबाट जोगाउन सकिन्छ । तेल अथवा क्रिम लगाउनुभन्दा पहिले पानीले हात चिसो बनाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । कडाखालको साबुनको प्रयोग कम गर्नुपर्छ । पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ । पर्याप्त मात्रामा फलफूल, सागसब्जीको प्रयोग गर्नुपर्छ । घाममा निस्किँदा सनस्क्रिम र मोइश्चराइजिङ क्रिमको प्रयोग गर्नुपर्छ । पोतो, डण्डिफोर आयो भने चम्किलो हुन अनेक किसिमका औषधि लगाउने गरिन्छ, जसले छालालाई पातलो बनाइदिने, जथाभावी रौं उम्रिने समस्या आउँछ । यी क्रिम र औषधिले छालाको संवेदना नै बिगारी दिन्छ, अर्थात् त्यो क्रिम प्रयोग नगरीकन बाहिर निस्कनै नसकिने हुन्छ । यस कारण पनि जे पायो त्यही सनस्क्रिनको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
कस्तो किसिमको सनस्क्रिन लगाउनुपर्छ त ?
सनब्लक घामबाट बच्ने क्रिम हो । यसको उपयोगले छालालाई धेरै समस्याबाट बचाउन सकिन्छ । यसले छाला चिलाउने, चाँडै चाउरी पर्ने, अल्ट्राभ्वाइलेटको असर, कालोपन हुनबाट रोक्छ । तर, यसका लागि सनब्लक गुणस्तरीय हुनुपर्छ । नेपालमा गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने प्रणाली छैन । यसैले यस्ता औषधि जथाभावी कस्मेटिक र फार्मेसी पसलमा किन्नुभन्दा चिकित्सकको सल्लाह र सिफारिशमा मात्र लगाउनुपर्छ । बजारमा किन्दा पनि गुणस्तर भए/नभएको हेर्नुपर्छ । बजारमा अहिले नक्कली सनब्लक छ्यासछ्यास्ती छ । सबैको छाला एउटै किसिमको पनि हुँदैन । छालाको प्रकृति हेरेर मात्र सनब्लकमा भएको औषधीय गुणको आधारमा चिकित्सकले सनब्लक लेखिदिन्छन् । यस्तै, औषधि उद्योगले उत्पादन गरेका सनब्लक मात्रै उपयोग गर्नुपर्छ ।
औषधि कम्पनीले नै उत्पादन गरेको सनब्लक उपयोग गर्नुपर्ने अन्य कारण के के हुन् ?
पहिलो कारण त यस्ता प्रसाधनमा गुणस्तर नियन्त्रण हुन्छ । अर्को, बजारको भन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो पनि हुन्छ । बजारको कस्मेटिक सनब्लकको प्रचार गर्न ठूला सेलिबे्रटी नै प्रयोग गरिने भएकाले उत्पादनको लागतभन्दा बजारीकरण महँगो हुन्छ । यसले गर्दा सामानको बजार भाउ सोहीअनुसार महँगिने भइहाल्यो । यस्तै, मानिसको छालाको प्रवृत्ति र प्रकृति फरक फरक हुन्छ । ड्राई स्किनलाई ओयली सनस्क्रिन चाहिन्छ भने कसैलाई ट्रान्सपरेण्ट किसिमको सनस्क्रिनको आवश्यकता हुन्छ । यसबारे चिकित्सकलाई मात्र थाहा हुन्छ, जस्तै– पुरुषलाई प्राकृतिक देखिने खालको सनब्लक उपयुक्त हुन्छ । यसैगरी औषधि कम्पनीकै सनब्लकमा केही कमजोरी देखियो भने उजुरी गर्न सकिन्छ । किनकि यी कम्पनी नियमकानूनको आधारमा चलेका हुन्छन् । बजारका सामग्रीको गुणस्तरको विषयमा उजुरी गर्ने निकाय नै हुँदैन ।
प्रसङ्ग फेरौं, कपाल झर्नु र तालु खुइलिने समस्या केले हुन्छ ?
अहिले कपाल झर्ने समस्या ३० देखि ४० प्रतिशतलाई छ । यसलाई एण्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया भनिन्छ । यसलाई नेपालीमा तालु खुइलिने समस्या भन्ने गरिन्छ । यो अहिले यो चुनौतीपूर्ण समस्याको रूपमा देखिएको छ । हरेक घरका दुईजनालाई यो समस्या भएको पाइन्छ । यो समस्या बढी मात्रामा आर्य समुदायका मानिसमा देखिएको छ । उनीहरूमा दाह्री–जुँगा बढी आउने अनि कपाल खुइलिने समस्या छ, अर्थात् नचाहिने ठाउँमा बढी रौं आउँछ । मानिसमा एण्ड्रोजेन नामक हर्मोन हुन्छ । यसले गर्दा यो समस्या भएको हो ।
तालु खुइलिनुको कारण अझै प्रस्ट्याइदिनुहोस् न ?
पहिले पहिले मानिस ३०–४० वर्ष कटेपछि यो समस्या देखापथ्र्यो । तर, अहिले यो कपाल झर्ने समस्या बच्चा र किशोरावस्थामा समेत देखिन थालेको छ । यसो हुनुमा शुरूमा कपालको नसा खुम्चिएर रौं कमजोर हुन्छ र अन्त्यमा मर्न थाल्छ । हाम्रो शरीरको हत्केला, पैताला र अन्य केही अङ्गबाहेक अन्य भागको छालाको भित्री सतहको धेरै ठाउँमा कतै अत्यधिक बाक्ला र कतै पातला फोलिकल भन्ने एक प्रकारका नली हुन्छन् । तिनीहरूको जरामा पछि रौंको रूपमा विकसित हुने थुप्रै कोष हुन्छन् । फोलिकलको वरिपरि मसिना रक्तनली पनि हुन्छन् । रगतबाट आवश्यक पौष्टिक तत्त्व पाएपछि फोलिकलका कोष बढ्न थाल्छन् । जब फोलिकलको भित्री भाग नयाँ कोषहरूले भरिन्छ, पुराना कोष बाहिर धकेलिन्छन् । त्यसरी धकेलिएर बाहिर निस्कनु नै रौं उम्रिनु हो । तर, यो क्रम टाउकोको अगाडिको भागमा विविध कारणले हुन पाउँदैन । रक्तनली सुक्दै जान्छ, जसले गर्दा नयाँ रौं उम्रिन पाउँदैन । पुराना पनि मर्दै जान्छ । बिरुवालाई पानी नपुगेपछि मरेजस्तै रौं उम्रिने भागमा पोषण नभएपछि मर्दै जान्छ । यसले गर्दा तालु खुइलिन्छ ।
तालु खुइलिन लाग्यो भनेर कसरी थाहा पाउने ?
एउटा औसत वयस्क मानिसको शरीरमा १ लाखदेखि १ लाख ५० हजारजति रौं हुन्छन । हरेक दिन करीब १०० ओटाजति रौं झर्दछन् । योभन्दा बढी रौं झर्न थाल्यो र कपाल पातलिन थाल्यो भने खुइलिन लागेको भनेर थाहा पाउनुपर्छ । कपाल कमजोर र झुस्रे हुन थाल्यो भने छिटोभन्दा छिटो छाला रोग विशेषज्ञसँग परामर्श गरी उपचारको थालनी गर्नुपर्छ ।
तालु खुइलिनुका कारक तत्व के के हुन् ?
वंशाणुगत गुण, भिटामिन, प्रोटिनलगायत पौष्टिक तŒवको कमी, व्यक्तिमा हुने रोग, मानसिक तनाव आदि तालु खुइलिनुका कारक तत्त्व हुन् । यसबाहेक ठूलो आघात, ठूलो अप्रेशन, क्यान्सर उपचारको मुख्यतया किमोथेरापीले गर्दा रौं झर्छ । छालालाई अत्यधिक हानि गर्ने रङ कपालमा लगाउनु पनि एउटा कारण हो ।
प्रदूषण, नकारात्मक जीवनशैली, विषाक्त खानपान, पोषणको अभाव, रसायनको प्रयोगलगायत कारणले समेत तालु खुइलिन्छ । धूमपानले रक्तनली पातलो हुन्छ र शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन थाल्छ । यसले गर्दा पनि कपाल झर्ने समस्या ल्याउँछ । महिला तथा पुरुष दुवैको क्षणिक रूपमा कपाल झर्ने कारण धेरैजसो उस्तै हुन्छन् भने दीर्घकालीन कारण प्रायः फरक हुन्छन् ।
kasari kapal jarna rokna sakin6?